Micrometer: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwa a | Ngwaike efu
Agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị ka nkeji ogologo, na micrometer anyị na -ekwu maka ebe a bụ ngwa akpọrọ aha. A makwaara ya dị ka nlele palmer, ma nwee ike bụrụ ngwa dị oke mkpa maka onye ọ bụla ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ maka ndị nwere mmasị maka DIY, ebe ọ na -enye ohere iji oke nkenke tụọ ihe ngwa ndị ọzọ enweghị ike.
N'isiokwu a, ị ga -amụta ntakịrị ihe kedu ihe ọ bụ, gịnị ka ọ bụ, ka o si arụ ọrụ, yana igodo nke ịhọrọ nke dị mma maka ọrụ ọdịnihu gị ...
1 Kedu ihe bụ micrometer?
1.2 Akụkụ nke micrometer
1.3 Otu micrometer palmer ma ọ bụ caliper si arụ ọrụ
2 Ebe ịzụta micrometer
Kedu ihe bụ micrometer?
El micrometer, ma ọ bụ Palmer caliper, ọ bụ ezigbo ihe e ji atụ̀ ihe. Dị ka aha ya na -egosi, a na -eji ya atule ihe ndị pere mpe. Na mkpokọta, ha na -enwekarị obere mperi, na -enwe ike tụọ ihe ruru otu narị ụzọ (0,01 mm) ma ọ bụ puku puku (0,001 mm) nke milimita.
Ọdịdị ya ga -echetara gị ọtụtụ ihe vernier caliper ma ọ bụ nlele ot. N'ezie, otu o si arụ ọrụ yiri nnọọ. Jiri kposara nwere ogo gụsịrị akwụkwọ nke a ga -eji chọpụta nha. Ngwaọrụ ndị a na -emetụ nsọtụ nke ihe a ka a tụọ, na ilele nha ya ị ga -enweta nsonaazụ nha ahụ. N'ezie, ọ nwere opekata mpe yana kacha, n'ozuzu ya bụ 0-25 mm, n'agbanyeghị na enwere ụfọdụ ndị buru ibu.
con mmepụta iheKarịsịa n'oge Mgbanwe Mmegharị, nnukwu mmasị n'ịtụ ihe n'ihe kpọmkwem malitere ito nke ọma. Ngwa eji eme ihe n'oge ahụ, dị ka ihe nlele, ma ọ bụ mita, ezughị.
Usoro mepụtara ihe gara aga, dị ka nkedo micrometer nke William Gascoigne kwuru nke 1640, ha wetara mmelite maka vernier ma ọ bụ vernier eji na calibers nke oge ahụ. Astronomy bụ otu n'ime ngalaba izizi ebe a ga -etinye ya n'ọrụ, iji teliskop were tụọ ịdị anya.
Mgbe e mesịrị, a ga -abịa mgbanwe na ndozi maka ụdị ngwa a. Dị ka French Ọnye na -bụ Jean Laurent Palmer?, onye na 1848 wuru mmepe mbụ nke micrometer aka. E gosipụtara ihe ngosi ahụ na Paris na 1867, ebe ọ ga -adọta uche Joseph Brown na Lucius Sharpe (nke BRown & Sharpe), ndị malitere imepụta ya dị ka ngwa na 1868.
Ihe omume a mere ka ndị ọrụ ogbako ahụ nwee ike ịtụkwasị anya na ngwa ọrụ karia nke ha nwere na mbụ. Mana ọ gaghị abụ ruo 1890, mgbe onye ọchụnta ego America na onye mepụtara ihe Laroy Sunderland Starrett emelitere micrometer ma detuo ụdị ya ugbu a. Na mgbakwunye, ọ tọrọ ntọala ụlọ ọrụ Starrett, otu n'ime ndị na -emepụta akụrụngwa nha taa.
Akụkụ nke micrometer
Na onyonyo dị n'elu ị nwere ike ịhụ akụkụ kachasị mkpa nke Palmer caliper ma ọ bụ micrometer. Bụ partes bụ:
1. Isi: ọ bụ mpempe ọla nke mejupụtara etiti. Emepụtara ya site na ihe anaghị agbanwe nke ukwuu na mgbanwe ọkụ, ya bụ, na mgbasawanye na mgbagide, n'ihi na nke a nwere ike ime ka ewere nha na -ezighi ezi.
2. Tope: bụ nke ga -ekpebi 0 nha. Ọ dị mkpa na ejiri ihe siri ike mee ya, dị ka nchara, iji gbochie ịdọka na akwa wee nwee ike gbanwee nha ahụ.
3. Egwu: ọ bụ ihe eji agagharị agagharị nke ga -ekpebi nha nke micrometer. Nke a ga -abụ nke na -agagharị ka ị na -atụgharị ịghasa ahụ ruo mgbe ọ kpọtụrụ akụkụ ahụ. Nke ahụ bụ, anya dị n'etiti elu na ọgọ ga -abụ nha. N'otu aka ahụ, a na -ejikarị otu ihe ahụ eme elu ya.
4. Idozi lever: na -enye gị ohere igbochi mmegharị nke ịgba iji dozie nha ka ọ ghara imegharị, ọbụlagodi na ị wepụrụ mpempe iji tụọ.
5. Nke ato: Ọ bụ akụkụ nke ga -amachi ike a na -eme mgbe a na -eme nha kọntaktị. Enwere ike idozi ya n'ụzọ dị mfe.
6. Mkpanaka mkpanaka: Nke a bụ ebe edekọtara nha nha kacha zie ezi, na iri iri mm. Ndị nwere vernier ga -enwekwa ọkwa nke abụọ maka nkenke ka ukwuu, ọbụlagodi puku kwuru puku milimita.
7. Ogwe edoziri: bụ ebe a na -aka akara nha. Ahịrị nke ọ bụla bụ otu milimita, dabere na ebe akara drum akpọrọ, nke ahụ ga -abụ nha.
Otu micrometer palmer ma ọ bụ caliper si arụ ọrụ
Micrometer nwere ụkpụrụ dị mfe. Ọ dabere na a kposara iji gbanwee obere mwepụ na oke nha ekele maka nha ya. Onye na -eji ụdị ngwa ọrụ a ga -enwe ike ịghasa nkedo ahụ ruo mgbe ndụmọdụ ịtụ ihe ga -akpọtụrụ n'elu ihe a ga -atụ.
Site na ilele akara dị na mgbụsị akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ, enwere ike ikpebi nha ya. Na mgbakwunye, ọtụtụ micrometer ndị a gụnyere a vernier, nke ga -enye ohere ịgụ akụkụ ihe na irighiri ihe site na ntinye nke obere nha.
N'ezie, n'adịghị ka caliper ma ọ bụ caliper, naanị ihe Palmer na -atụ diameters ma ọ bụ ogologo. Ị maraworị na ihe nlele ahụ nwekwara ikike ịtụ n'ime diameters, na ọbụna omimi ... Agbanyeghị, dịka ị ga -ahụ na ngalaba na -esote, enwere ụdị ụfọdụ nwere ike idozi nke a.
E nwere ọtụtụ ụdị micrometer. Dabere na usoro ọgụgụ, ha nwere ike ịbụ:
Ọrụ arụzi: ha bụ akwụkwọ ntuziaka kpamkpam, a na -agụkwa ya site n'ịkọwa ọkwa e dere ede.
digital: ha bụ elektrọnikụ, nwere ihuenyo LCD ebe egosipụtara ọgụgụ maka ịdị mfe ka ukwuu.
Enwere ike ikewa ha abụọ dịka akwụkwọ ụdị nkeji ewe n'ọrụ:
Sistemụ ntụpọ: ha na -eji nkeji SI, ya bụ, usoro metric, nwere milimita ma ọ bụ obere obere ya.
Sistemụ Saxon: jiri sentimita dị ka ntọala.
Dabere na ihe ha tụrụ, ị nwekwara ike ịhụ micrometer dị ka:
Ọkọlọtọ: bụ ndị na -atụ ogologo ma ọ bụ dayameta nke iberibe ahụ.
Omimi: ha bụ ụdị pụrụiche nke nwere nkwado nwere nkwụsị abụọ ma ọ bụ ntọala na -ezu ike n'elu. Ọ bụ ezie na mmụba na -apụta n'akụkụ ala iji metụ ala wee si otú a tụọ omimi n'ụzọ ziri ezi.
Ime ụlọ: A na -ejikwa mpempe kọntaktị abụọ edozie ha iji tụọ anya ma ọ bụ diameters dị n'ime ya, dị ka n'ime tube, wdg.
E nwekwara ụzọ ndị ọzọ katalọgụ ha, mana ndị a bụ ihe kacha mkpa.
Ebe ịzụta micrometer
Ọ bụrụ na ịchọrọ zụta micrometer dị mma na nke ziri ezi, lee ụfọdụ ndụmọdụ nwere ike ịmasị gị:
Proster analog na mpụga micrometer (0-25 mm na ngụsị akwụkwọ 0.1 mm).
Beslands dijitalụ n'èzí micrometer (0-25mm nwere ngụsị akwụkwọ 0.001mm) nwere ngosi LCD.
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » Micrometer: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwa a